Esi ewepu ihuenyo na Windows, Mac, iOS na gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Esi eweputa ihuenyo
Ignacio Sala | | Mobiles, Kọmputa
O doro anya na ha enyela gị ogo nwanne di na ezinụlọ, ndị ikwu gị niile, gụnyere ndị enyi, ga-akpọtụrụ gị ka ị nwee ike Idozi nsogbu ahụ adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ nsogbu nhazi ndị na-adịghị achọta ihe ngwọta na ntanetị, ma ọ bụ na-echegbughị ịchọta ya.
N'ọtụtụ oge, ihe kachasị mfe ịme bụ izipu nseta ihuenyo na ntinye nke ngwa ma ọ bụ sistemụ ga-enwerịrị ka ọ wee rụọ ọrụ nke ọma. N’isiokwu a anyị na-egosi gị otu anyị nwere ike were nseta ihuenyo na gam akporo, iPhone, Windows na Mac.
1 Were nseta ihuenyo gam akporo
2 Were nseta ihuenyo na iOS
2.1 Were nseta ihuenyo na iPhone 8, 8 Plus na mbụ
2.2 Were nseta ihuenyo na iPhone X na mgbe e mesịrị
3 Were nseta ihuenyo na Mac
3.1 Ihuenyo zuru ezu na Mac
3.2 Nseta ihuenyo nke ngwa gosipụtara na ihuenyo na Mac na onyinyo
3.3 Nseta ihuenyo nke ngwa gosipụtara na ihuenyo na Mac n'enweghị onyinyo
4 Were nseta ihuenyo na Windows
4.1 Usoro 1
4.2 Usoro 2
4.3 Usoro 3
Were nseta ihuenyo gam akporo
Na nsụgharị mbụ nke gam akporo, inwe ike nseta ihuenyo na ntanetị gam akporo bụ ihe odyssey, ebe ọ bụ na onye ọ bụla na-emepụta anyị nyere anyị ụzọ dị iche iche anyị ga-esi mee ya ma anyị ga-ejedebe na weebụsaịtị onye nrụpụta na-achọ ozi a. Ugbu a, iji nweta nseta ihuenyo na ọnụ gam akporo anyị nwere nhọrọ atọ, ọ bụ ezie na nke mbụ niile aghọwo ọkọlọtọ n'ime ụlọ ọrụ ahụ, Dabara nke ọma.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, na ruo mgbe ihe mkpịsị aka mkpịsị aka nke n'ihu ngwaọrụ malitere ịla n'iyi, njikọta kachasị dị na ịpị bọtịnụ ọnụ maka otu sekọnd. bọtịnụ ike na bọtịnụ olu olu.
Ndị nrụpụta ndị ọzọ, dị ka Samsung, ejirila usoro ịpị bọtịnụ ụlọ na njikọ na ịgbanye ọnụ ma ọ bụ gbanyụọ ọnụ iji nweta nseta ihuenyo ruo ọtụtụ afọ, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ amalitela wepụ bọtịnụ ụlọ n'ihu ọnụ ya, abanyela na ọkọlọtọ nke ọtụtụ ndị nrụpụta na ime ha, anyị ga-agbanye bọtịnụ olu ala yana bọtịnụ ma ọ bụ gbanyụọ ọnụ maka otu nke abụọ.
Manufacturersfọdụ ndị nrụpụta na-enye anyị ohere iweghara nseta ihuenyo site na ngwanrọ site na sistemụ, nke mere na naanị anyị ga-abanye na nchịkwa njikwa wee pịa nhọrọ dị na menu a iji weghara ọdịnaya egosipụtara n'oge ahụ na ihuenyo ahụ. Ọrụ a, dabere na ụdị sistemụ arụmọrụ, na-enye anyị ohere iwekọ screenshots ọnụ na sonye ha ma emechaa na-enweghị iji ngwa ndị ọzọ.
Were nseta ihuenyo na iOS
Iji nweta nseta ihuenyo na ngwaọrụ iOS anyị, anyị ga-ebu ụzọ mata nke ngwaọrụ ọ bụ, ebe ọ bụ na ụdị iPhone kachasị ọhụrụ, usoro agbanweela, n'ihi bọtịnụ ụlọ efu na iPhone X.
Were nseta ihuenyo na iPhone 8, 8 Plus na mbụ
Site na mbata nke iPhone 7 na 7 Plus, bọtịnụ ụlọ wee bụrụ bọtịnụ nkịtị iji nye anyị nzaghachi haptic oge ọ bụla anyị pịa ya, ka anyị wee mara n'oge niile na mpaghara nke akara aka maka bọtịnụ sitere na ihe nlereanya mbụ, etinyela nke ọma. Na mbu o gha adiri gi, ma dika ubochi n’aga gha eme gi aru ị gaghị atụ uche na bọtịnụ ahụ abụghị nke anụ ahụ.
Iji nweta nseta ihuenyo na iPhone 8 na 8 Plus ma ọ bụ tupu, anyị ga-pịa bọtịnụ mmalite, nke a makwaara dị ka ụlọ, na bọtịnụ gbanyụọ na ihuenyo ọnụ. N'oge e jidere ya, anyị ga-anụ ụda igwefoto mkpuchi, iji gosi na anyị emeela usoro ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Were nseta ihuenyo na iPhone X na mgbe e mesịrị
Mgbe nhichapụ nke bọtịnụ ụlọ na iPhone X, usoro maka ịme nseta ihuenyo na iOS agbanweela nke ukwuu. Na ngwaọrụ a na ndị niile na-aga ahịa n’enweghị bọtịnụ mmalite mara mma usoro ahụ mejupụtara pịa bọtịnụ ike na igodo olu elu ọnụ.
Ọ bụrụ na anyị pịa igodo olu, ngwaọrụ ahụ ga- ga-egosi nhọrọ iji gbanyụọ ngwaọrụ ma ọ bụ kpọọ oku mberede. Mgbe ị na-ese ihe oyiyi ahụ, onyinyo ahụ ga-enwu ọcha na ụda mkpuchi kpochapụwo nke igwefoto enyo ga-ada ụda iji gosi na anyị emeela usoro ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Were nseta ihuenyo na Mac
macOS, sistemụ arụmọrụ Mac, na-enye anyị ọnụọgụ nhọrọ dị ukwuu ma a bịa n'ị nweta nseta ihuenyo, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na anyị nwere ike ijide foto niile egosipụtara na ihuenyo anyị, kamakwa anyị nwere ike ijide windo ahụ nke otu ngwa.
Ozugbo anyị weghaara ihuenyo ahụ, n'agbanyeghị usoro eji, anyị ga-anụ ụda nke shutter nke igwefoto, iji gosi na anyị emeela usoro ahụ n'ụzọ ziri ezi. Methodszọ atọ dịnụ iji were nseta ihuenyo na Mac.
Ihuenyo zuru ezu na Mac
Iji mee ka a kpọọ niile ozi gosiri na anyị na ihuenyo anyị ga-pịa igodo: CMD + Mgbanwe + 3
Nseta ihuenyo nke ngwa gosipụtara na ihuenyo na Mac na onyinyo
Chọta naanị windo ngwa nke egosiri na ihuenyo Mac dị mma maka mgbe anyị chọrọ ịme nkuzi ma ọ bụ na anyị chọrọ ịkekọrịta windo nhazi akọwapụtara iji soro ndị ọzọ kerịta ya. Ime, macOS na-enye anyị abụọ "emechara" na onyinyo na enweghị ndò.
Iji nweta nseta ihuenyo nke windo ngwa ahụ, gaa n'ihu na ntinye igodo ndị a: CMD + Mgbanwe + 4. Na-esote, pịa na oghere oghereN'oge ahụ, akara ngosi nke igwefoto ga-egosipụta na cursor ma anyị ga-eji òké họrọ windo nke anyị chọrọ ijide.
Nseta ihuenyo nke ngwa gosipụtara na ihuenyo na Mac n'enweghị onyinyo
Nhọrọ nke atọ a na-enye anyị ohere iwepụta nseta ihuenyo nke ngwa ahụ egosiri na ihuenyo na-enweghị shading gosipụtara na nhọrọ gara aga. Iji mee nke a, anyị ga-aga n'ihu dịka na ngalaba gara aga, mana mgbe ị na-ahọrọ windo ngwa ahụ anyị chọrọ ijide na oke, anyị ga-pịa igodo alt.
Were nseta ihuenyo na Windows
Windows, dị ka Apple ilekota, na-enye anyị nhọrọ dị iche iche mgbe ị na-ewere nseta ihuenyo, ma anyị chọrọ ijide ihuenyo niile ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ijide onyinyo nke ngwa ahụ egosiri na ihuenyo.
Zọ kachasị ọsọ iji nweta nseta ihuenyo bụ site na Nchikota igodo Win + Print Screen (Prnt Scrn) A ga - echekwa nnwale niile ejiri usoro a mee na nchekwa Screenshots n'ime Ihe Oyiyi.
Ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ idezi onyonyo anyị weghaara na ihuenyo anyị, anyị nwere ike jiri naanị igodo Bipute (Prnt Scrn), ka emepere imeghe ihe onyonyo ihe oyiyi na mado nnabata anyi mere.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iwe nseta ihuenyo nke otu akụkụ ihuenyo, anyị nwere ike iji ya Snipping ngwa, nke anyị nwere ike ịkọwa mpaghara ihuenyo nke anyị chọrọ ijide.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Esi eweputa ihuenyo
Fujifilm XP130, igwefoto igwefoto na-apụ apụ